နန်းသီရိလွင်| January 10, 2013 | Hits:789
| | မဒေးကျွန်း ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနေရာမှ နေ့စား အလုပ်သမားများ (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင်/ ဧရာဝတီ)
အလုပ်ချိန် ၈ နာရီထက် ပိုမိုခိုင်းစေခံရလျှင် တိုင်ကြားနိုင်သည် ဟုဆိုပေးထားသည့် ကတိအတိုင်း ခံစားခွင့် မရသဖြင့် ဘွဲ့ရ အလုပ်သမများ ဆန္ဒပြမြန်မာ့အထည်ချုပ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနောက် မလိုက်ပါနှင့်အလုပ်သမား ဥပဒေ ခိုင်မာအားကောင်းရန် လိုအပ်နေဟုဆိုမြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဒု ဝန်ကြီးဆွေးနွေး (ရုပ်/သံ)
Hay Man January 10, 2013 - 10:31 am Oh my gosh! How do they survive? I wish the people boycott and no one works for this company.